दाइजो एक कुप्रथा - डा. सि.के सिंह • Health News Nepal
दाइजो एक प्रथा भएकाले यो बाध्यात्मक छ । यसले समाजमा असामनता, उत्पिडन, हत्या तथा हिंसा जस्ता जघन्य सामाजिक अपराधहरुलाई मलजल गरिरहेको छ ।
Dr.C.K.Singh, Coordinator, Child Marriage and Dowry Free Nepal,National Campaign
✍️ डा. सि.के सिंह
बाल बिबाह एबम दाइजो मुक्त नेपाल, राष्ट्रिय अभियान
विवाहको समयमा बेहुली तर्फबाट बेहुला वा बेहुलाका परिवारलाई दिने नगद तथा जिन्सी सरसामानलाई नै दाइजो भनिन्छ । यसलाई तराइ तथा मधेसतिर दहेज पनि भनिन्छ । सामान्यतः दैनिक जीवनमा चाहिने घरेलु सामानहरु जस्तै फर्निचर, लत्ताकपडाका सामाग्रीहरु दाइजो दिइन्छ । सुनचाँदी हिरामोतीका महंगा गरगहनाहरु पनि दाइजोमा पर्छन् । समयक्रमसँगै आधुनिक सुविधाका सामाग्रीहरु जस्तै टिभी, मोटरसाइकल, कम्पूटर, कार, जस्ता सामाग्रीहरु पनि दाइजोको रुपमा दिइने गरेको पाइन्छ ।
सामान्यतः दाइजोलाई बेहुलीतर्फबाट बेहुलालाई विवाह गरेर जाँदा दिइएका उपहारको रुपमा अत्यन्त हलुका ढंगले लिएको मात्र पाइन्छ । सतहमा त्यस्तो देखिए पनि गहिराइ भने अत्यन्त भयानक र् दर्दनाक छ । किनकी दाइजो सामान्यरुपमा उपहारजस्तो बुझिन्छ । उपहार त दिएप्नि हुन्छ र नदिएपनि हुन्छ । तर, दाइजो त सदियौँदेखि हाम्रो समाजमा एक कुप्रथाको रुपमा जरा गाडेको छ ।
दाइजो एक प्रथा भएकाले यो बाध्यात्मक छ । यसले समाजमा असामनता, उत्पिडन, हत्या तथा हिंसा जस्ता जघन्य सामाजिक अपराधहरुलाई मलजल गरिरहेको छ । दिनहूँजस्तो हाम्रो समाजमा घट्ने महिला हिंसा, हत्या, आत्महत्याजस्ता घटनाहरु यसका ज्वलन्त प्रमाणहरु हुन् । यस्ता घटनाहरुको प्रमुख कारक दाइजो प्रथा हुने गरेको सम्बन्धित अनुसन्धानहरुले पुष्टि गरेको छ ।
तसर्थ दाइजोले कस्ता कस्ता समस्या एंव विसंगतीहरु निम्त्याउँछ, र यसको सामाधानका लागि के गर्नुपर्छ ? भन्नेजस्ता कुरामा आम नागरिक सचेत हुनु जरुरी छ ।